Madaxwaynaha Jabuuti oo sheegay in Dekedda Ber-bera aysan kula Tartami Karin Suuqa dalka Itoobiya iyo Sababta - Hablaha Media Network
Madaxwaynaha Jabuuti oo sheegay in Dekedda Ber-bera aysan kula Tartami Karin Suuqa dalka Itoobiya iyo Sababta
HMN:- Madaxweynaha Dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in Dekadda Berbera aysan dalkiisa kula tartami karin suuqa Itoobiya.
“Si dekadda Berbera ay u qabsato suuqa Itoobiya waa in dib loo dhisaa waddo dhererkeedu yahay 280 KM taas oo dDkadda ku xirta xadka Itoobiya, hal milyan iyo bar ayaa ku baxaya halkii KM iyo in ka badan 400 Mliyan..Yaa dhiibaya? ku darsoo, qalabka ay maraakiibta waaweyn ku xiran karaan waxaa ay Berbera u jirtaa 12 KM halka ay Djabuti ay tahay meel ku toosan, waxyaabo badan ayaa noo hiillinaya”.
Geelle oo u waramayey TesfaNews , waxaa la weydiiyey doorka Cabdiraxmaan Boore ku leeyahay Dekadda Berbera? Wuxuuna ku jawaabay awal wuu ku lahaa door , laakiin hada waa laga saaray.
Warbixinta oo dheer waxaa daabacay TesfaNews